PCBA + boaty plasitika - Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
Manao fivoriambe vokatra feno izahay. Ny fanangonana PCBA ao anaty vala plastika no dingana mahazatra indrindra.
Tahaka ny fivorian'ny PCB, mamokatra lasitra plastika / tsindrona ao an-trano izahay. Izany dia manome tombony ho an'ny mpanjifantsika amin'ny resaka fifehezana kalitao, fandefasana ary ny vidiny.
Ny fananana fahalalana lalina amin'ny lasitra plastika / tsindrona dia manavaka ny Fumax amin'ny orinasa fivoriambe PCB madio hafa. Faly ireo mpanjifa fa mahazo vahaolana lehibe ho an'ny vokatra vita avy amin'ny Fumax. Ny fiaraha-miasa amin'ny Fumax dia nanjary mora kokoa tamin'ny fanombohana ka hatramin'ny vokatra vita.
Ny fitaovana plastika mahazatra indrindra iarahanay miasa dia ny ABS, PC, PC / ABS, PP, Nylon, PVDF, PVC, PPS, PS, HDPE, sns ...
Ity manaraka ity dia fanadihadiana tranga momba ny vokatra izay misy takelaka PCB, plastika, tariby, mpampitohy, fandaharana, fitiliana, fonosana… sns hatrany amin'ny vokatra farany - vonona ny hamidy.
Mikoriana ny famokarana ankapobeny
Dingana fitsapana / fizahana
Fanaraha-maso ho avy
Fanaraha-maso ny fivorian'ny SMD
Amin'ny alàlan'ny fanangonana lavaka
Performance PLC fitsapana
Famaritana ny famokarana vokatra ho an'ny Master Master G3
taorian 'i jk Antontan-taratasy azo ampiharina
As Alternative current
AOI Fanaraha-maso optika mandeha ho azy
AQL Fepetran'ny kalitao azo ekena
fandriana azo ahorona Varotra varotra ivelan'ny talantalana
CT Transformer ankehitriny
Unité centrale Fitaovana fanodinana foibe
DVT Fitsapana fanamarinana famolavolana
EMS Serivisy fanamboarana elektronika
ENIG Volom-boasary nikela elektrika
ESD Famoahana electroStatic
SAD Andalana fivorian'ny farany
IPC Ny Association Connecting Electronics Industries, Institute for Printed Circuits teo aloha
LAN Tambajotra eo an-toerana
LED Diode elektrôlônesina maivana
MSL Haavo marefo
N / A Tsy misy azo ampiharina
PCB Birao boribory vita pirinty
PLC Fifandraisana PowerLine
RDOC DOCument momba izany
REQ fepetra takiana
SMD Fitaovana napetaka ambonin-javatra
WAN Tambajotra midadasika
→ Ireo antontan-taratasy voatanisa ho RDOC-XXX-NN
Aiza no misy ny "XXXX": SUC, QAL, PCB, ELE, MEC na TST Aiza ny "NN" no isan'ny antontan-taratasy
→ fepetra takiana
Voatanisa ho REQ-XXX-NNNN
Aiza no misy ny "XXXX": SUC, QAL, PCB, ELE, MEC na TST
Aiza ny "NNNN" no isan'ny takiana
→ Ireo fivorian'ny vondron'olona voatanisa ho MLSH-MG3-NN
Aiza ny "NN" no isan'ny fivorian'ny zana-kazo
1.3 Fitantanana famoahana rakitra
Ny sub-assemblaces sy ny antontan-taratasy dia manana ny endriny voasoratra ao anaty antontan-taratasy: FCM-0001-VVV
Firmwares dia manana ny dikanteniny voasoratra ao amin'ny antontan-taratasy: FCL-0001-VVV
Aiza ny "VVV" no kinova antontan-taratasy.
2 Lahatsoratra sy zavatra
Ity tahirin-kevitra ity dia manome ny fepetra takiana amin'ny famokarana Smart Master G3.
Smart Master G3 atsy ho atsy voatondro ho "vokatra", dia ny fampidirana singa maromaro ho faritra elektronika sy mekanika fa mijanona ho rafitra elektronika ihany. Izany no antony itadiavan'ny Mylight Systems (MLS) serivisy mpanamboatra elektronika (EMS) mba hitantanana ny famokarana manontolo ny vokatra.
Ity antontan-taratasy ity dia tsy maintsy mamela mpandray anjara kely iray hanome ny Mylight Systems tolotra manerantany momba ny famokarana ny vokatra.
Ny tanjon'ity antontan-taratasy ity dia ny:
- Omeo angona teknika momba ny famokarana ny vokatra,
- Omeo ny kalitao takiana mba hiantohana ny fanajana ny vokatra,
- Omeo ny takiana amin'ny rojom-panomezana mba hiantohana ny vidiny sy ny haben'ny vokatra.
Ny mpifanaraka EMS dia tsy maintsy mamaly ny 100% amin'ny takiana amin'ity rakitra ity.
Tsy misy takiana azo ovaina raha tsy misy ny fifanarahana MLS.
Ny takiana sasantsasany (manisy marika hoe "nangataka ny endrika EMS") dia mangataka amin'ilay mpifanaraka hanome valiny amin'ny teboka teknika, toy ny fanaraha-maso kalitao na fonosana. Ireo fepetra ireo dia avela hisokatra ho an'ny mpiorina EMS hanolotra valiny iray na maromaro. MLS dia hanamarina ny valiny.
MLS dia tsy maintsy mifandray mivantana amin'ny mpifanaraka EMS voafantina, fa ny mpiorina EMS dia afaka misafidy sy mitantana ny subcontraktor hafa miaraka amin'ny fankatoavana MLS.
Firafitry ny fanapotehana 3
4 Mikoriana amin'ny famokarana ankapobeny
5 Fepetra takiana amin'ny rojom-bidy
RDOC-SUC-1. PLD-0013-CT fanadihadiana 100A
RDOC-SUC-2. MLSH-MG3-25-MG3 fonosana fonosana
RDOC-SUC-3. NTI-0001-Fanamarihana d'installation MG3
RDOC-SUC-4. GEF-0003-Gerber fisie amin'ny tabilao AR9331 an'ny MG3
Ny mpifanaraka voafantina dia tsy maintsy afaka mamorona vokatra 10K isam-bolana.
(Nanontany ny endrika EMS)
Ny fonosana fandefasana dia eo ambanin'ny andraikitry ny mpanamboatra.
Ny fonosana fandefasana dia tsy maintsy mamela ny vokatra hoentina amin'ny ranomasina, rivotra ary arabe.
Ny famaritana ny fonosana fandefasana dia tsy maintsy omena ny MLS.
Ny fonosana fandefasana dia tsy maintsy ampidirina (jereo ny sary 2):
- Ny vokatra MG3
- baoritra mahazatra 1 (ohatra: 163x135x105cm)
- Fiarovana anaty baoritra anatiny
- Tanana ivelany mahafinaritra 1 (endrika 4) misy logo Mylight sy fampahalalana samihafa. Jereo ny RDOC-SUC-2.
- fanadihadiana momba ny 3 CT. Jereo ny RDOC-SUC-1
- Tariby Ethernet 1: tariby fisaka, 3m, ROHS, fitokanana 300V, Cat 5E na 6, CE, 60 ° c farafahakeliny
- Takelaka teknika 1RDOC-SUC-3
- Famaritana ivelany 1 miaraka amin'ny mombamomba anao (fehezan-dalàna sy kaody bara): Reference, Isa serial, adiresy PLC MAC
- Fiarovana harona plastika raha azo atao (hifanakalo hevitra)
Fig 2. Ohatra amin'ny fonosana
REQ-SUC-0022: Karazana fonosana lehibe
Ny subkontraktera dia tsy maintsy manome ny fomba fonosana entana fonosana ao anaty fonosana lehibe kokoa.
Ny isa farafahakeliny fonosana 2 dia 25 ao anaty baoritra lehibe.
Ny mombamomba ny mombamomba ny singa tsirairay (miaraka amina kaody QR) dia tsy maintsy hita miaraka amin'ny marika ivelany amin'ny fonosana lehibe tsirairay.
REQ-SUC-0030: famatsiana PCB
Ny subkontraktera dia tsy maintsy afaka manome na manamboatra ny PCB.
REQ-SUC-0040: famatsiana mekanika
Ny subcontractor dia tsy maintsy afaka manome na manamboatra ny valindrihana plastika sy ny faritra mekanika rehetra.
REQ-SUC-0050: famatsiana singa elektronika
Ny subcontractor dia tsy maintsy afaka mamatsy singa elektronika rehetra.
REQ-SUC-0060: Safidin'ny singa passive
Mba hanatsarana ny vidiny sy ny fomba lojika, ny subcontraktor dia afaka manolotra ny fanondroana ampiasaina ho an'ny singa rehetra mandalo izay voafaritra ho "generic" ao amin'ny RDOC-ELEC-3. Ireo singa passive dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny tsanganana famaritana RDOC-ELEC-3.
Ireo singa voafantina rehetra dia tsy maintsy hanan-kery avy amin'ny MLS.
REQ-SUC-0070: Sarany manerantany
Ny vidin'ny EXW tanjona amin'ny vokatra dia tsy maintsy omena ao anaty antontan-taratasy natokana ary azo havaozina isan-taona.
REQ-SUC-0071: vidiny amin'ny antsipiriany
Ny vidiny dia tsy maintsy atao amin'ny antsipiriany farafaharatsiny:
- BOM isaky ny fiangonana elektronika, faritra mekanika
- Vola amin'ny rafitra
- Vidin'ny indostrialy: dabilio, fitaovana, fizotrany, andiany mialoha…
REQ-SUC-0080: Fanekena ny rakitra
Ny rakitra famokarana dia tsy maintsy fenoina tanteraka sy eken'ny MLS alohan'ny andiany mialoha sy famokarana betsaka.
REQ-SUC-0090: fanovana rakitra
Ny fanovana rehetra ao anatin'ny rakitra fanamboarana dia tsy maintsy taterina sy eken'ny MLS.
REQ-SUC-0100: Fepetrapetrahan'ny mpanamory fiaramanidina
Fepetra takiana mialoha ho an'ny vokatra 200 no angatahina alohan'ny hanombohana famokarana betsaka.
Ny lesoka sy ny olana hita nandritra ity fihazakazahana mpanamory fiaramanidina ity dia tokony hotaterina amin'ny MLS.
REQ-SUC-0101: Fitsapana azo antoka mialoha momba ny andiany
Aorian'ny fanamboarana Pilot, ny fanandramana azo antoka, na ny fitsapana Validation Design (DVT) dia tsy maintsy atao farafaharatsiny:
- Tsingerin'ny hafanana haingana -20 ° C / + 60 ° C
- fitsapana fampisehoana PLC
- Fanamarinana ny mari-pana anatiny
- Fitsapana mitete
- Fitsapana fampiasa feno
- Fitsapana adin-tsaina amin'ny bokotra
- Mandritra ny fotoana maharitra
- Fanombohana mangatsiaka / mafana
- Fanombohana ny hamandoana
- Tsingerin'ny herinaratra
- Fanaraha-maso impedance manokana
Ny fomba fitsapana amin'ny antsipiriany dia homena ny mpifanaraka ary tsy maintsy eken'ny MLS.
Ny fitiliana tsy nahomby rehetra dia tokony hotaterina amin'ny MLS.
REQ-SUC-0110: baiko famokarana
Ny baiko famokarana rehetra dia hatao miaraka amin'ny fampahalalana etsy ambany:
- Fanovozan-kevitra momba ny vokatra nangatahina
- Ny habetsaky ny vokatra
- Famaritana fonosana
- rakitra kinova hardware
- rakitra kinova Firmware
- Fampahalalana manokana (misy ny adiresy MAC sy ny laharana serial)
Raha misy tsy fantatra na tsy mazava ny iray amin'ireto fampahalalana ireto dia tsy tokony hanomboka ny famokarana ny EMS.
Fepetra takiana amin'ny kalitao 6
Ny PCB, ny singa elektronika ary ny fivorian'ny elektronika dia tsy maintsy tehirizina ao anaty efitrano misy hamandoana sy mifehy ny mari-pana:
- Ny hamandoana eo ambanin'ny 10%
- Ny mari-pana eo anelanelan'ny 20 ° C sy 25 ° C.
Ny subkontraktera dia tsy maintsy manana fomba fifehezana MSL ary omeo an'ny MLS.
PCB sy singa maromaro hita ao amin'ny BOM dia iharan'ny fizotran'ny MSL.
Ny vokatra dia tokony ho fanarahan-dalàna RoHS.
Ny subkontraktera dia tokony hampahafantatra amin'ny MLS izay akora ampiasaina amin'ny vokatra.
Ohatra, ny subcontractor dia tsy maintsy mampahafantatra MLS izay lakaoly / solder / cleaner ampiasaina.
REQ-QUAL-0050: kalitaon'ny mpifanaraka
Ny mpifanaraka dia tokony ho voamarina ISO9001.
Ny mpandray anjara dia tsy maintsy manome ny taratasy fanamarinana ISO9001.
REQ-QUAL-0051: kalitaon'ny mpifanaraka 2
Raha miara-miasa amin'ny subcontraktor hafa ny subcontraktor dia tokony ho voamarina ISO9001 koa izy ireo.
Ny singa elektronika rehetra sy ny takelaka elektronika dia tsy maintsy araraotina amin'ny fiarovana ESD.
Ny takelaka elektronika dia tsy maintsy diovina raha ilaina.
Ny fanadiovana dia tsy tokony hanimba ny ampahany mora tohina toy ny mpanova, ny mpampitohy, ny marika, ny bokotra, ny mpanelanelana ...
Ny subkontraktera dia tsy maintsy manome ny fomba fidiovana MLS.
REQ-QUAL-0080: Fanaraha-maso ho avy
Ny singa elektronika rehetra sy ny batch PCB dia tsy maintsy misy fizahana miditra miaraka amin'ny fetra AQL.
Ny faritra mekanika dia tsy maintsy misy refy miditra amin'ny fetran'ny AQL raha ampidirina ivelany.
Ny subkontraktera dia tokony hanome ny MLS ny fomba fifehezana miditra ao anatin'izany ny fetra AQL.
REQ-QUAL-0090: Fanaraha-maso ny vokatra
Ny vokatra dia tokony hanana fifehezana output miaraka amin'ny fisafoana santionany farafahakeliny sy fetran'ny AQL.
Ny subkontraktera dia tokony hanome ny MLS ny fomba fifehezana ny fidirana ao anatin'izany ny fetra AQL.
REQ-QAL-0100: fitehirizana ireo vokatra nolavina
Ny vokatra tsirairay izay tsy mahomby amin'ny fitsapana na fanaraha-maso, na inona na inona fitsapana, dia tsy maintsy apetrak'ilay mpiorina MLS ho an'ny fanadihadiana tsara.
REQ-QAL-0101: fampahalalana momba ny vokatra nolavina
MLS dia tsy maintsy ampahafantarina ny hetsika rehetra izay afaka mamorona vokatra nolavina.
MLS dia tsy maintsy ampahafantarina ny isan'ny vokatra nolavina na ny batch rehetra.
REQ-QAL-0110: tatitra momba ny kalitaon'ny famokarana
Ny mpifanaraka EMS dia tsy maintsy manao tatitra amin'ny MLS isaky ny andiam-pamokarana ny habetsahan'ny vokatra nolavina isaky ny fizahana na dingana fanaraha-maso.
Ny fanaraha-maso, ny fitsapana ary ny fizahana rehetra dia tsy maintsy tehirizina sy daty.
Tsy maintsy hofaritana mazava sy hosarahina ireo andiany.
Ireo fanovozan-kevitra ampiasaina amin'ny vokatra dia tokony ho azo zahana (références marina sy batch).
Ny fanovana ny referansa rehetra dia tsy maintsy ampandrenesina amin'ny MLS alohan'ny fampiharana.
REQ-QUAL-0130: Fanilihana manerantany
MLS dia afaka mamerina andiany iray manontolo raha toa ka mihoatra ny 3% ao anatin'ny 2 taona latsaka ny fandavana noho ny mpifanaraka.
REQ-QUAL-0140: Fanaraha-maso / fanaraha-maso ivelany
MLS avela hitsidika ny mpampiroborobo (ao anatin'izany ireo mpampifanaraka azy manokana) hangataka tatitra tsara kalitao sy hanao fitsapana fizahana, farafahakeliny in-2 isan-taona na ho an'ny famokarana. MLS dia afaka misolo tena ny orinasa antoko fahatelo.
REQ-QUAL-0150: Fanaraha-maso maso
Ny vokatra dia manana fizahana maso vitsivitsy voalaza ao anatin'ny fivezivezena amin'ny famokarana ankapobeny.
Midika ireo fanaraha-maso ireo:
- Fanamarinana ny sary
- Fanamarinana ireo fivoriambe marina
- Famaritana ny marika / sticker
- Fanamarinana ny gorodona na ny tsy fahitana maso
- Fanamafisana orina
- Fanamarinana heatshrinks manodidina ny fuse
- Fanamarinana ny tari-dalan'ny tariby
- Fanamarinana glues
- Zahao ireo teboka miempo
Ny subkontraktera dia tokony hanome ny MLS ny fomba fizahana azy Visual ao anatin'izany ny fetra AQL.
REQ-QUAL-0160: fikorianan'ny famokarana ankapobeny
Tsy maintsy hajaina ny filaharan'ny dingana tsirairay amin'ny fikorianan'ny fanamboarana ankapobeny.
Raha misy antony, toy ny famerenana ohatra, tsy maintsy averina indray ny dingana iray, ny dingana rehetra aorian'izany dia tsy maintsy atao ihany koa amin'ny fitsapana Hipot manokana sy fitsapana FAL.
Fepetra PCB 7
Ny vokatra dia misy PCB telo samihafa
RDOC-PCB-1. IPC-A-600 Fanekena ny solaitrabe vita pirinty
RDOC-PCB-2. GEF-0001-Gerber fisie ny birao lehibe an'ny MG3
RDOC-PCB-3. GEF-0002-Gerber fisie an'ny AR7420 board of MG3
RDOC-PCB-4. GEF-0003-Gerber fisie amin'ny tabilao AR9331 an'ny MG3
RDOC-PCB-5. IEC 60695-11-10: 2013: Fitsapana ny loza ateraky ny afo - Fizarana 11-10: Afo fitsapana - Fomba fitsapana afo mitsivalana sy mitsivalana 50 W
REQ-PCB-0010: toetra mampiavaka PCB
Ny toetra lehibe eto ambany dia tsy maintsy hajaina
Isan'ny sosona 4
Ny hatevin'ny varahina ivelany 35µm / 1oz min
Haben'ny PCB 840x840x1.6mm (birao lehibe), 348x326x1.2mm (birao AR7420),
780x536x1mm (birao AR9331)
Ny hatevin'ny varahina anatiny 17µm / 0,5oz min
Fanokanana / zotra farafahakeliny 100µm
Sarontava kely solder 100µm
Minimum amin'ny alàlan'ny savaivony 250µm (mekanika)
Fitaovana PCB FR4
Ny hateviny ambany indrindra 200µm
sosona varahina ivelany
Silccreen Eny ambony sy ambany, loko fotsy
Soldermask Eny, maitso eo ambony sy ambany, ary ambonin'ireo vias rehetra
PCB amin'ny Panel Eny, azo ahitsy araka ny tinady
Amin'ny alàlan'ny famenoana tsy misy
Sarontava solder amin'ny alàlan'ny ENY
Fitaovana ROHS / REACH /
REQ-PCB-0020: fanandramana PCB
Ny fitokana-monina sy ny fitondra-tena amin'ny harato dia tokony hosedraina 100%.
REQ-PCB-0030: fanamarihana PCB
Ny fanamarihana PCB dia tsy avela amin'ny faritra voatokana irery ihany.
Ny PCB dia tsy maintsy asiana marika amin'ny referansa PCB, ny kinova ary ny datin'ny famokarana.
Tsy maintsy ampiasaina ny referansa MLS.
REQ-PCB-0040: rakitra fanamboarana PCB
Jereo ny RDOC-PCB-2, RDOC-PCB-3, RDOC-PCB-4.
Mitandrema, ny toetra mampiavaka ny REQ-PCB-0010 no fampahalalana lehibe ary tsy maintsy hajaina.
REQ-PCB-0050: kalitao PCB
Manaraka ny kilasy IPC-A-600 1. Jereo RDOC-PCB-1.
Ireo fitaovana ampiasaina ao amin'ny PCB dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny CEI 60695-11-10 de V-1. Jereo ny RDOC-PCB-5.
Fepetra elektronika 8 voangona
Birao elektronika 3 no tsy maintsy angonina.
RDOC-ELEC-1. IPC-A-610 Fandraisana ny fivoriambe elektronika
RDOC-ELEC-2. GEF-0001-Gerber fisie ny birao lehibe an'ny MG3 RDOC
ELEC-3. GEF-0002-Gerber fisie an'ny AR7420 birao an'ny MG3 RDOC
ELEC-4. GEF-0003-Gerber fisie an'ny AR9331 birao an'ny MG3 RDOC
ELEC-5. BOM-0001-BOM an'ny birao lehibe an'ny MG3 RDOC-ELEC-6.
BOM-0002 BOM fisie an'ny board AR7420 an'ny MG3 RDOC-ELEC-7.
BOM-0003 BOM fisie an'ny board AR9331 an'ny MG3
Fig 3. Ohatra amin'ny tabilao elektronika mivory
Ny BOM RDOC-ELEC-5, RDOC-ELEC-6, ary RDOC-ELEC-7 dia tsy maintsy hajaina.
REQ-ELEC-0020: Fivorian'ny singa SMD:
Ireo singa SMD dia tsy maintsy atambatra miaraka amin'ny tsipika fivoriambe mandeha ho azy.
Zahao RDOC-ELEC-2, RDOC-ELEC-3, RDOC-ELEC-4.
REQ-ELEC-0030: Fivorian'ny lohan'ny lavaka:
Amin'ny alàlan'ny singa lavaka dia tsy maintsy apetaka amin'ny onja mifantina na amin'ny tanana.
Ny tsimatra sisa dia tsy maintsy tapahina ambanin'ny 3mm ny haavony.
REQ-ELEC-0040: fanamafisana orina
Ny fanamafisana ny solder dia tsy maintsy atao eo ambanin'ny relay.
Fig 4. Fanamafisana soldering eo amin'ny farany ambany birao
REQ-ELEC-0050: Mihena ny hafanana
Ny Fuse (F2, F5, F6 amin'ny birao lehibe) dia tsy maintsy mihena ny hafanana mba hialana amin'ny faritra anatiny ho tsindrona ao anaty vala raha sendra mihoa-pampana.
Fig 5. Mihena manodidina ny fuse ny hafanana
REQ-ELEC-0060: Fiarovana amin'ny fingotra
Tsy mila fiarovana arofanina.
REQ-ELEC-0070: Ireo mpampifandray CT dia manadihady
Ireo mpampitohy CT vehivavy dia tsy maintsy soloina amin'ny tanana amin'ny birao lehibe toy ny sary etsy ambany.
Ampiasao ny mpampifandray MLSH-MG3-21.
Tandremo ny loko sy ny làlan'ny tariby.
Sary 6. Fivoriambenan'ny mpampifandray CT
REQ-ELEC-0071: lakaoly mpampitohy CT
Mila ampiana lakaoly ao amin'ny mpampitohy CT probes hiarovana azy ireo amin'ny fampihetsiketsehana / famokarana diso.
Jereo ny sary etsy ambany.
Ny lisitry ny lakaoly dia ao anatin'ny RDOC-ELEC-5.
Fig 7. Lakaoly amin'ny mpampifandray CT
Tsy mangataka tropisialy.
REQ-ELEC-0090: Fanaraha-maso Assembly AOI:
Ny 100% ny solaitrabe dia tsy maintsy misy ny fizahana AOI (soldering, orientation ary ny fanamarihana).
Ny zana-kazo rehetra dia tsy maintsy jerena.
Ny programa AOI amin'ny antsipiriany dia tsy maintsy omena ny MLS.
REQ-ELEC-0100: Fifehezana ny singa passive:
Ny singa passive rehetra dia tsy maintsy voamarina alohan'ny hitaterana amin'ny PCB, farafaharatsiny farafahakeliny miaraka amin'ny maso olona.
Ny fomba fifehezana ireo singa passive antsipiriany dia tsy maintsy omena ny MLS.
REQ-ELEC-0110: fizahana taratra X:
Tsy misy fanaraha-maso X ray no angatahina fa ny tsingerin'ny mari-pana sy ny fanandramana miasa dia tsy maintsy atao raha misy fiovana amin'ny fizotran'ny SMD.
Ny fitsapana ny tsingerin'ny mari-pana dia tsy maintsy atao isaky ny fitsapana famokarana miaraka amin'ny fetra AQL.
REQ-ELEC-0120: Fikarakarana indray:
Ny famerenana amin'ny laoniny ny takelaka elektrika dia avela ho an'ny singa rehetra afa-tsy ny boribory integer: U21 / U22 (board AR7420), U3 / U1 / U11 (board AR9331).
Ny famerenana mandeha ho azy dia avela ho an'ny singa rehetra.
Raha disassemblement ny vokatra iray mba hanaovana rework satria tsy nahomby tamin'ny dabilio fanadinana farany dia tokony hamerina ny fitsapana Hipot sy ny fitsapana farany izy.
REQ-ELEC-0130: mpampitohy 8pins eo anelanelan'ny AR9331 sy ny board AR7420
Ireo mpampifandray J10 dia ampiasaina hampifandray ny board AR9331 sy ny board AR7420. Ity fivoriambe ity dia tsy maintsy atao tanana.
Ny referansa mpampifandray hampiasaina dia MLSH-MG3-23.
Ny mpampitohy dia manana pitch 2mm ary 11mm ny haavony.
Fig 8. Tariby sy mpampifandray eo amin'ny takelaka elektronika
REQ-ELEC-0140: mpampitohy 8pins eo anelanelan'ny Main board sy ny AR9331 board
Ny mpampifandray J12 dia ampiasaina hampifandraisana ireo tabilao lehibe sy ny zana-kazo AR9331. Ity fivoriambe ity dia tsy maintsy atao tanana.
Ny referansa tariby misy mpampifandray 2 dia
Ireo mpampifandray ampiasaina dia manana pitch 2mm ary 50mm ny halavan'ny tariby.
REQ-ELEC-0150: mpampifandray 2pins eo anelanelan'ny Main board sy ny AR7420 board
Ny mpampitohy JP1 dia ampiasaina hampifandraisana ny tabilao lehibe mankany amin'ny tabilao AR7420. Ity fivoriambe ity dia tsy maintsy atao tanana.
Ny halavan'ny tariby dia 50mm. Ny tariby dia tsy maintsy ahodina sy arovana / amboarina miaraka amin'ny hafanana mihena.
REQ-ELEC-0160: Fivoriana fanaparitahana hafanana
Tsy misy dissipator fanafanana tokony hampiasaina amin'ny chip AR7420.
Fepetra mekanika 9
Antontan-taratasy momba ny trano
RDOC-MEC-1. PLD-0001-PLD ny tampon'ny rakitsoratry ny MG3
RDOC-MEC-2. PLD-0002-PLD an'ny Takelaka ambanin'ny MG3
RDOC-MEC-3. PLD-0003-PLD an'ny hazavana tampon'ny MG3
RDOC-MEC-4. PLD-0004-PLD an'ny bokotra 1 an'ny MG3
RDOC-MEC-5. PLD-0005-PLD an'ny bokotra 2 an'ny MG3
RDOC-MEC-6. PLD-0006-PLD an'ny Slider an'ny MG3
RDOC-MEC-7. IEC 60695-11-10: 2013: Fitsapana loza amin'ny afo - Fizarana 11-10: Afo fitsapana - 50 W marindrano ary
fomba fitsapana afo mitsangana
RDOC-MEC-8. IEC61010-2011 FAHAMARINANA SAFETY AMIN'NY FITAOVANA elektrika ho an'ny refy,
FAMPANDROSOANA, SY FAMPIASANA AN-DALANA - FIZARANA 1: Fepetra takiana
RDOC-MEC-9. IEC61010-1 2010: Fepetra takiana amin'ny fiarovana ny fitaovana elektrika handrefesana, hifehezana,
fampiasana laboratoara - Fizarana 1: Fepetra takiana amin'ny ankapobeny
RDOC-MEC-10. BOM-0016-BOM fisie an'ny MG3-V3
RDOC-MEC-11. PLA-0004-Sarin'ny fivorian'ny MG3-V3
Fig 9. Fijerena ny MGE. Jereo ny RDOC-MEC-11 sy RDOC-MEC-10
Ny vala mekanika dia misy ampahany plastika 6.
REQ-MEC-0010: Fiarovana amin'ny afo amin'ny ankapobeny
Ny ampahany amin'ny plastika dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny RDOC-MEC-8.
REQ-MEC-0020: ny fitaovan'ny faritra plastika dia tsy maintsy mijanona amin'ny lelafo (Nanontany ny endrika EMS)
Ireo fitaovana ampiasaina amin'ny faritra plastika dia tsy maintsy manana kilasy V-2 na tsara kokoa araka ny RDOC-MEC-7.
REQ- MEC-0030: Ny fitaovan'ny mpampifandray dia tsy maintsy mijanona amin'ny lelafo (Nanontany ny endrika EMS)
Ireo fitaovana ampiasaina amin'ny faritra mpampifandray dia tsy maintsy manana kilasy V-2 na tsara kokoa araka ny RDOC-MEC-7.
REQ-MEC-0040: Varavarana ao anaty mekanika
Tsy tokony hanana lavaka izy io, afa-tsy amin'ny:
- Mpifandray (tsy maintsy manana clearance mekanika kely noho ny 0,5mm)
- Hole ho an'ny Factory reset (1.5mm)
- Lavaka ho an'ny fiparitahan'ny maripana (savaivon'ny 1.5mm misy elanelam-potoana 4mm farafahakeliny) manodidina ny tarehin'ny mpampitohy Ethernet (jereo ny sary etsy ambany).
Fig 10. Ohatra ny lavaka amin'ny vala ivelany ho an'ny famafana ny hafanana
REQ-MEC-0050: Loko amin'ny faritra
Ny faritra plastika rehetra dia tsy maintsy fotsy tsy misy fepetra hafa.
REQ-MEC-0060: Loko bokotra
Ny bokotra dia tsy maintsy manga miaraka amin'ny aloky ny sary MLS ihany.
Ny trano dia tsy maintsy manaja ny drafitra RDOC-MEC-1, RDOC-MEC-2, RDOC-MEC-3, RDOC-MEC-4, RDOC-MEC-5, RDOC-MEC-6
REQ-MEC-0080: tsindrona lasitra sy fitaovana
Ny EMS dia avela hitantana ny fizotrany feno amin'ny tsindrona plastika.
Ny marika fampidirana / famoahana plastika dia tsy tokony ho hita avy any ivelany amin'ny vokatra.
9.2 Fivoriana mekanika
REQ-MEC-0090: fivorian'ny fantsom-pahazavana
Ny fantsom-pahazavana dia tsy maintsy mivondrona amin'ny fampiasana loharano mafana amin'ny teboka miempo.
Ny fefy ivelany dia tsy maintsy atsonika sy hita ao anaty lavaka teboka voatsoaka.
Fig 11. Fivoriana fantsom-bokatra sy bokotra misy loharano mafana
REQ-MEC-0100: fivorian'ny bokotra
Ny bokotra dia tsy maintsy mivondrona mampiasa loharano mafana amin'ny teboka miempo.
REQ-MEC-0110: Screw amin'ny rindrina ambony
Visy 4 no ampiasaina hanamboarana ny tabilao AR9331 mankany amin'ny fonosana ambony. Jereo ny RDOC-MEC-11.
Nampiasa ny referansa ao anatin'ny RDOC-MEC-10.
Ny tady mampihenjana dia tokony ho eo anelanelan'ny 3.0 sy 3.8 kgf.cm.
REQ-MEC-0120: visy amin'ny fivorian'ny ambany
Visy 4 no ampiasaina hanamboarana ny tabilao lehibe mankany amin'ny vala ambany. Jereo ny RDOC-MEC-11.
Ny visy mitovy aminy ihany koa no ampiasaina hanamboarana vala eo anelanelany.
Ny tady mampihenjana dia tokony ho eo anelanelan'ny 5.0 sy 6 kgf.cm.
REQ-MEC-0130: Ny mpampitohy CT probe dia mamakivaky ilay vala
Ny ampahan'ny rindrina ao amin'ny mpampitohy CT probe dia tsy maintsy ahitsy miaraka tsy misy pinch mba hahafahan'ny hermetisialy tsara sy ny fahamendrehana tsara hanintona tariby tsy ilaina.
Sary 12. Ampahany amin'ny rindrina ao anaty fikarohana CT
9.3 Silkscreen ivelany
REQ-MEC-0140: rindrambaiko ivelany
Etsy ambany ny silkscreen dia tsy maintsy atao amin'ny vala ambony.
Fig 13. Saripika efijery ivelany hajaina
REQ-MEC-0141: Lokon'ny loko landy
Ny lokon'ny silkscreen dia tsy maintsy mainty afa-tsy ny logo MLS izay tsy maintsy ho manga (mitovy loko noho ny bokotra).
REQ-MEC-0150: refy fehezan-kafatra isa isa
- Ny refin'ny marika: 50mm * 10mm
- Haben'ny soratra: 2mm ny haavony
- Dimy kaody bara: 40mm * 5mm
Fig 14. Ohatra amin'ny marika kaody bara nomerao serial
REQ-MEC-0151: Toeran'ny mari-pamantarana kaody isa
Jereo ny takiana silkscreen ivelany.
REQ-MEC-0152: Loko marika kaody isa fampiasa amin'ny isa
Ny loko kaody marika bara nomerao serial dia tsy maintsy mainty.
REQ-MEC-0153: Fitaovana marika kaody nomerao serial
Ny marika nomerao dia tsy maintsy apetaka ary tsy tokony hanjavona ny fampahalalana araka ny RDOC-MEC-9.
REQ-MEC-0154: Sarobidy ny kaody marika bara nomerao
Ny sanda isa isa dia tsy maintsy omen'ny MLS na amin'ny filaharana (rakitra manokana) na amin'ny alàlan'ny rindrambaiko natokana.
Ity ambany ity ny famaritana ny toetran'ny isa serial:
M YY MG XXXXX P
tompony Taona 2019 = 19 Volana = 12 desambra Isa isa isaky ny volana batcheach MpanamboatraReferensi
REQ-MEC-0160: refy fehezan-kaody fisorohana kaody
Fig 15. Ohatra ny kaody kaody fampidirana kaody fampahavitrihana
REQ-MEC-0161: Toeran'ny mari-pamantarana kaody fampandehanana
REQ-MEC-0162: Loko kaody marika bara fanentanana
Ny loko kaody marika bara fampandehanana dia tsy maintsy mainty.
REQ-MEC-0163: Fampidirana kaody fampidirana kaody fampandehanana
Ny mari-pamantarana kaody fampahavitrihana dia tsy maintsy apetaka ary tsy tokony hanjavona ny fampahalalana araka ny RDOC-MEC-9.
REQ-MEC-0164: Sarobidy ny kaody marika bara nomerao
Ny soatoavin'ny kaody fampandehanana dia tsy maintsy omen'ny MLS na amin'ny filaharana (rakitra manokana) na amin'ny alàlan'ny rindrambaiko natokana.
REQ-MEC-0170: refy marika lehibe
- refy 48mm * 34mm
- Ireo marika dia tsy maintsy soloin'ny endrika ofisialy. Minimun habe: 3mm. Jereo ny RDOC-MEC-9.
- Haben'ny soratra: 1.5 kely indrindra
Sary 16. Ohatra ny marika lehibe
REQ-MEC-0171: Toeran'ny mari-pamantarana lehibe
Ny marika lehibe dia tsy maintsy apetraka eo anilan'ny MG3 amin'ny efitrano voatokana.
Ny marika dia tsy maintsy eo ambonin'ny vala ambony sy ambany amin'ny fomba tsy avela hisokatra amin'ny fefy tsy misy fanesorana ny marika.
REQ-MEC-0172: Loko marika lehibe
Ny loko marika lehibe dia tsy maintsy mainty.
REQ-MEC-0173: Fitaovana marika lehibe
Ny marika lehibe dia tsy maintsy apetaka ary ny fampahalalana dia tsy tokony hanjavona araka ny RDOC-MEC-9, indrindra ny mari-pamantarana fiarovana, famatsiana herinaratra, anaran'ny Mylight-Systems ary boky momba ny vokatra.
REQ-MEC-0174: sanda marika lehibe
Ny soatoavin'ny mari-pamantarana lehibe dia tsy maintsy omen'ny MLS na amin'ny filaharana (rakitra manokana) na amin'ny alàlan'ny rindrambaiko natokana.
Ny soatoavina / lahatsoratra / logo / soratra dia tsy maintsy manaja ny isa ao amin'ny REQ-MEC-0170.
9.5 fanadihadiana momba ny CT
REQ-MEC-0190: famolavolana fikarohana CT
Ny EMS dia avela hamolavola tariby CT probes, ao anatin'izany ny tariby vavy mifatotra amin'ny MG3, tariby lahy mifatotra ny CT fikarohana ary ny tariby fanitarana.
Ny sary rehetra dia tsy maintsy omena ny MLS
REQ-MEC-0191: Ny fitaovan'ny ampahany amin'ny fizahana CT dia tsy maintsy mijanona amin'ny lelafo (Nanontany ny endrika EMS)
Ny fitaovana ampiasaina amin'ny faritra plastika dia tsy maintsy manana kilasy V-2 na tsara kokoa araka ny CEI 60695-11-10.
REQ-MEC-0192: Ny fitaovan'ny ampahany amin'ny fizahana CT dia tsy maintsy misy fitokanana tariby Ny fitaovan'ny fitsapana CT dia tokony hanana fisarahana 300V avo roa heny.
REQ-MEC-0193: tariby vehivavy probe CT
Ny fifandraisana amin'ny vehivavy dia tsy maintsy atokana ivelan'ny toerana azo aleha miaraka amin'ny kely indrindra 1.5mm (savaivony ambony indrindra amin'ny lavaka 2mm).
Tsy maintsy fotsy ny lokon'ny tariby.
Ny tariby dia soloina amin'ny lafiny iray mankany amin'ny MG3 ary amin'ny lafiny iray dia tsy maintsy misy mpampitohy vehivavy azo fehezina sy azo fehezina.
Ny tariby dia tsy maintsy manana crimped pass-through ampahany izay hampiasaina hamakivaky ny valindrihana plastika an'ny MG3.
Ny halavan'ny tariby dia tsy maintsy manodidina ny 70mm miaraka amin'ny mpampitohy aorian'ny ampahany mandalo.
MLS referansa amin'ity ampahany ity dia ho MLSH-MG3-22
Sary faha-18 ohatra
REQ-MEC-0194: tariby CT fanadihadiana lehilahy
Ny tariby dia soloina amin'ny lafiny iray mankany amin'ny fanadihadiana CT ary amin'ny lafiny iray dia tsy maintsy misy mpampitohy lehilahy azo fehezina sy azo fehezina.
Ny halavan'ny tariby dia tsy maintsy manodidina ny 600mm tsy misy mpampitohy.
MLS referansa amin'ity ampahany ity dia ho MLSH-MG3-24
REQ-MEC-0195: tariby fanitarana fikarohana CT
Ny halavan'ny tariby dia tsy maintsy manodidina ny 3000mm tsy misy mpampitohy.
MLS referansa amin'ity fizarana ity dia MLSH-MG3-19
REQ-MEC-0196: Fanontaniana momba ny fanadihadiana CT
Fanontaniana maromaro momba ny fikarohana CT azo ampiasaina amin'ny ho avy.
Ny EMS dia avela hifampiraharaha amin'ny mpanamboatra fikarohana CT hanangonana ny fikarohana CT sy ny tariby.
Ny referansa 1 dia MLSH-MG3-15 miaraka amin'ny:
- 100A / 50mA CT fanadihadiana SCT-13 avy amin'ny mpanamboatra YHDC
- MLSH-MG3-24 tariby
Fig 20. ohatra CT fikarohana 100A / 50mA MLSH-MG3-15
Fitsapana elektrika 10
Antontan-taratasy fitsapana elektrika
RDOC-TST-1. Fomba fizahana PRD-0001-MG3
RDOC-TST-2. BOM-0004-BOM fisie amin'ny dabilio andrana MG3
RDOC-TST-3. PLD-0008-PLD an'ny dabilio andrana MG3
RDOC-TST-4. Raki-tseky SCH-0004-SCH amin'ny fisedrana andrana MG3
10.1 fitsapana PCBA
REQ-TST-0010: fanandramana PCBA
100% ny tabilao elektronika dia tsy maintsy hosedraina alohan'ny fivorian'ny mekanika
Ny asa farafahakeliny hitsapana dia:
- Fanokanana herinaratra eo amin'ny solaitrabe eo anelanelan'ny N / L1 / L2 / L3, ny birao lehibe
- 5V, XVA (10.8V ka 11.6V), 3.3V (3.25V ka 3.35V) ary 3.3VISO DC malefaka marina, tabilao lehibe
- Misokatra tsara ny fampitana raha tsy misy herinaratra, birao lehibe
- Fanokanana amin'ny RS485 eo anelanelan'ny GND sy A / B, AR9331 board
- fanoherana 120 ohm eo anelanelan'ny A / B amin'ny mpampitohy RS485, ny tabilao AR9331
- VDD_DDR, VDD25, DVDD12, 2.0V, 5.0V ary 5V_RS485 DC valiny marina, AR9331 board
- VDD sy VDD2P0 DC malefaka marina, tabilao AR7420
Ny fomba fitsapana PCBA amin'ny antsipiriany dia tsy maintsy omena MLS.
REQ-TST-0011: fanandramana PCBA
Ny mpanamboatra dia afaka manamboatra fitaovana hanaovana ireo fitsapana ireo.
Ny famaritana ny fitaovana dia tsy maintsy omena MLS.
Fig 21. Ohatra amin'ny fitaovana ho an'ny fanandramana PCBA
10.2 Fitsapana Hipot
REQ-TST-0020: fitsapana Hipot
Ny fitaovana 100% dia tsy maintsy hosedraina aorian'ny fivorian'ny mekanika farany fotsiny.
Raha rava ny vokatra iray (ho an'ny fanamboarana / fanamboarana toy ny exemple) dia tsy maintsy atao indray ny fitsapana aorian'ny famerenana amin'ny laoniny mekanika. Ny fitokana-monina mitokona avo lenta an'ny seranana Ethernet sy RS485 (lafiny voalohany) dia tsy maintsy hosedraina miaraka amin'ny herinaratra (ilany faharoa) amin'ny mpitarika rehetra.
Ka tariby iray no mifandray amin'ny tariby 19: seranan-tsambo Ethernet sy RS485
Ny tariby hafa dia mifandray amin'ny tariby 4: Neutre ary dingana 3
EMS dia tsy maintsy manao fitaovana iray mba hialana ny conducteur rehetra amin'ny lafiny iray amin'ny tariby iray ihany mba hanaovana fitsapana iray fotsiny.
DC 3100V volt dia tsy maintsy apetraka. 5s farafaharatsiny hametrahana ny herinaratra ary avy eo 2s farafahakeliny hitazonana ny herinaratra.
Tsy azo avela ny famoahana rano ankehitriny.
Fig 22. Fitaovana tariby mba hananana fitsapana mora foana Hipot
10.3 Fitsapana PLC fampisehoana
REQ-TST-0030: fitsapana PLC fampisehoana
(Famolavolana EMS nanontaniana na namboarina niaraka tamin'ny MLS)
100% ny fitaovana tsy maintsy hosedraina
Ny vokatra dia tsy maintsy mitantana ny fifandraisana amin'ny vokatra CPL hafa, tahaka ny plug PL 7667 ETH, amin'ny alàlan'ny tariby 300m (azo ahodina).
Ny tahan'ny data refesina amin'ny script "plcrate.bat" dia tokony mihoatra ny 12mps, TX ary RX.
Mba hananana pairing mora azafady, ampiasao ny script "set_eth.bat" izay nametraka ny MAC ho "0013C1000000" ary ny NMK ho "MyLight NMK".
Ny fitsapana rehetra dia tsy maintsy mandray 15 / 30s ambony indrindra ao anatin'izany ny fivorian'ny tariby herinaratra.
REQ-TST-0040: Toetran'ny may
Burn-In dia tsy maintsy atao amin'ny tabilao elektronika 100% miaraka amina conditons manaraka:
- famatsiana herinaratra 230V
- Nalefa ny seranan-tsambo Ethernet
- Vokatra marobe (farafahakeliny 10) amin'ny fotoana mitovy, herinaratra mitovy, miaraka amin'ny PLC NMK
REQ-TST-0041: Fanaraha-maso may
- Manjelatra isaky ny ora ny jery tarihiny ary azo alefa / tsy ekena ny fampitana
10.5 Fitsapana farany fivorian'ny
REQ-TST-0050: Fitsapana fivorian'ny farany
(Farafahakeliny farafahakeliny fitsapana omen'ny MLS)
100% ny vokatra dia tsy maintsy hosedraina ao amin'ny dabilio fitsapana fivorian'ny Farany.
Ny fotoana fitsapana dia tokony ho eo anelanelan'ny 2.30min sy 5 minitra aorinan'ny fanatsarana, ny automatization, ny traikefan'ny mpandraharaha, ny olana samihafa mety hitranga (toy ny fanavaozana ny firmware, ny olana amin'ny fifandraisana miaraka amin'ny fitaovana na ny fahamarinan-tsoliky ny famatsiana herinaratra).
Tanjona lehibe amin'ny dabilio fitsapana farany ny fitsapana:
- Fanjifana herinaratra
- Zahao ny kinovan'ny firmwares ary manavao azy ireo raha ilaina
- Zahao ny fifandraisana PLC amin'ny sivana
- Hizaha bokotra: Relays, PLC, Factory reset
- Zahao leds
- Zahao ny fifandraisana RS485
- Zahao ireo fifandraisana Ethernet
- Manao kalibration fandrefesana herinaratra
- Soraty ao anaty ny fitaovana ny laharana fanamafisana (Adiresy MAC, isa Serial)
- Amboary ny fitaovana handefasana azy
REQ-TST-0051: Boky fanandramana farany ho an'ny fivoriana
Ny fomba fanao amin'ny doka RDOC-TST-1 dia tsy maintsy vakiana tsara sy takarina alohan'ny hampiasana azy mba hahazoana antoka:
- Fiarovana ny mpampiasa
- Ampiasao tsara ny toeram-pitsapana
- Fampisehoana ny toeram-pitsapana
REQ-TST-0052: Fikojakojana ny fivorian'ny fivoriambe farany
Ny fampiasana ny fikojakojana ny dabilio andrana dia tsy maintsy atao mifanaraka amin'ny RDOC-TST-1.
REQ-TST-0053: Famantarana farany ho an'ny fivoriambe
Ny sticker / label dia tsy maintsy apetaka amin'ny vokatra araka ny voalaza ao amin'ny RDOC-TST-1.
REQ-TST-0054: Fitsapana farany momba ny fivoriana eo an-toerana
Ny hazo rehetra voatahiry ao anaty solosaina eo an-toerana dia tsy maintsy alefa matetika any amin'ny Mylight Systems (farafahakeliny indray mandeha isam-bolana na iray isaky ny batch).
REQ-TST-0055: Fotodrafitrasa data Remote data base
Ny dabilio fanandramana dia tsy maintsy ampifandraisina amin'ny Internet mba hahafahana mandefa hazo any amin'ny base data lavitra amin'ny fotoana tena izy. Ny fiaraha-miasa feno an'ny EMS dia maniry ny hamela an'ity fifandraisana ity ao anaty tamba-jotra anatiny.
REQ-TST-0056: Famokarana ny toeram-pitsapana
MLS dia afaka mandefa dabilio fitsapana maromaro any amin'ny MES raha ilaina izany
Ny EMS ihany koa dia avela hamerina ny dabilio fitsapana araka ny RDOC-TST-2, RDOC-TST-3 ary RDOC-TST-4.
Raha te hanao fanatsarana ny EMS dia tsy maintsy manontany MLS ny fanomezan-dàlana.
Ny dabilio fanandramana averina naverina dia tsy maintsy hamafisin'ny MLS.
Fandaharana 10.6 SOC AR9331
REQ-TST-0060: Fandaharana SOC AR9331
Ny fahatsiarovana ny fitaovana dia tsy maintsy apetraka alohan'ny fivoriambe miaraka amina programmer manerantany izay tsy nomen'ny MLS.
Ny firmware tokony halefa dia tokony ho foana ary hohamafisin'ny MLS alohan'ny andiany tsirairay.
Tsy misy personalization angatahina eto, ka ny fitaovana rehetra dia manana firmware mitovy eto. Ny personalization dia hatao aorian'io ao amin'ny dabilio fitsapana farany.
10.7 PLC chipset fandaharana AR7420
REQ-TST-0070: Fandaharana PLC AR7420
Ny fahatsiarovana ny fitaovana dia tsy maintsy apetraka alohan'ny handoroana ny fitsapana mba hampandeha ny chipset PLC mandritra ny fitsapana.
Ny chipset PLC dia voarindra amin'ny alàlan'ny rindrambaiko nomen'ny MLS. Manodidina ny 10 eo ho eo ny hetsika fikarohan-tselatra. Noho izany ny EMS dia afaka mandinika ny faran'ny 30 mandritra ny fiasa iray manontolo (Herin'ny tariby + tariby Ethernet + Flash + Esory tariby).
Tsy misy personalization angatahina eto, ka ny fitaovana rehetra dia manana firmware mitovy eto. Ny personalization (adiresy MAC sy DAK) dia hatao aorian'io ao amin'ny dabilio fitsapana farany.
Ny fahatsiarovana chipset PLC dia azo alefa koa alohan'ny fivoriana (hanandrana).